Home / Interior design / Fomba fanaovana hazo, Ahoana ny fomba hamoronana hatsarana gadona?
2020 / 11 / 29 FisokajianaInterior design 6192 0
Sampan-draharaha miasa ao amin'ny Fela Operations Interior Design Alliance
Hatsaran-tarehy tsotra Fusion + Fusion Log
Ny fomba vita amin'ny hazo dia afaka manafana trano, afaka manao trano feno fiainana, ary mety hampilamina sy kanto ny trano. Ny fampiasana fanaka namboarina tamin'ny loko hazo dia lehibe, saingy tsy manelingelina. Amin'ity tranga ity, ireo tranga roa ireo dia vita amin'ny fanaka fanaka hazo, ary ny famolavolana dia heverina ho hendry na aiza na aiza, mahatonga ny trano ho feno hatsarana miasa.
Ny tsipika hazo dia nilahatra ho sehatra, mitondra hatsarana gadona tokana amin'ny habakabaka, izay tsara tarehy eo ambanin'ny fitsipika, fa koa gadona singa geometrika hanome endrika hafa ny toerana.
Hazo + MUSIKA FIAINANA Japoney
Sampan-draharahan'ny famolavolana: Design Fela
Ny fomban'ny Japoney dia tsy fomba firy fa ny fihetsika asehony amin'ny fiainana - tsy miraika, milamina, miala sasatra. Ny haben'ny hazo, grills, taratasy camphor translucent, loko maivana ary faritra lehibe amin'ny akora voajanahary, ary ny fiverenan'ny fitaovana amin'ny natiora, dia mampiharihary fahatoniana, sahala amin'ny fiheverana ny fiainana "tsy misy hazavana afaka manazava mazava, tsy misy fandriam-pahalemana afaka hahatongavana lavitra ”.
Ny habaka dia maivana kokoa, mamorona rivo-piainana milamina ao an-trano, manjary manjavozavo ny fetran'ny habakabaka.
Ny rindrina mitondra enta-mavesatra, izay zoron'ny efitrano fandriana taloha, dia nanjary ampahany amin'ny lakozia, ny latabatra nosy ary ny seza fisakafoanana dia mifamatotra, ny lakozia andrefana sy ny faritra fisakafoanana dia natambatra ho iray, nanamarina ny firafitry ny habakabaka, ireo sakana nifanelanelana eo anelanelan'ny efitrano fisakafoanana sy ny latabatra nosy dia mirindra sy voajanahary, ary ny jiro miharo latsa-paka dia alentika ao anaty habakabaka amin'ny endrika géometrika misy tsipika sy faribolana, manatsara ny gadona sy ny gadon'ilay faritra.
Jiro ho an'ny zava-drehetra
Tendrombohitra sy renirano ho an'izao tontolo izao
Ny lehilahy tompon'ity tranga ity dia marefo manokana amin'ny hazavana sy ny feo, ary ny fanakatonana ny faritra fatoriana dia tsy maintsy mitaky. Mba hampisarahana ny tontolo iainana mitabataba, ny varavarankely dia vita amin'ny vera tsy misy fangarony telo (tsy ankanavaka ny efitrano fandraisam-bahiny), izay mahatratra ny vokatry ny fihenan'ny tabataba. Ny mpamorona dia nanao zorony teo ambadiky ny fandriana, ary nosarihana ireo ridao mba hahatratrarana ny alokaloka tonga lafatra, mamorona efitrano fatoriana avo lenta amin'ny fahitana sy ny fahitana.
Ny fandinihana dia mifamatotra amin'ny rivotra ivelany, ary ny varavarana misokatra misokatra amin'ny grille dia manafaka toerana, raha toa kosa ny fandinihana maro fampiasa miaraka amin'ireo tsihy tatamiji misy varavarankely dia azo ampiasaina ho faritra fialamboly an-trano isan'andro na efitrano fandraisam-bahiny. Mandritra izany fotoana izany, ny fidirana amin'ny efitrano fatoriana dia nafindra tao anaty fandalinana, nanala ny henatra noho ny fidirana tao amin'ny trano fidiovana.
Ny kabinetra mihantona mihantona eo am-baravaran'ny fianarana dia manome fahatsapana mitsinkafona sy mihena ny haavony.
Karazan-trano sy famolavolana fiaramanidina
Ny fanovana ny toerana misy ny efitrano fisakafoanana dia manakaiky ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitra fisakafoana, ary manitatra ny fetran'ny efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fisakafoanana rehefa mifanerasera akaiky, ary ny fanitarana ny habaka fialan-tsasatra dia manome fofonaina bebe kokoa ny trano, ary ny fizarana sahaza ny faritra dia avoaka ara-tsaina. Ny tsipika mavitrika ao an-trano dia boribory, ary mifamatotra ireo faritra fa tsy zaraina ho sakana kely hamoronana toerana mangarahara sy mirindra.
Trano mando-masoandro, milentika
Sampan-draharaha misahana ny endrika: Tianmu Design
Ny maraina, ny tara-masoandro avy amin'ny lambam-baravarana, nipetraka tamin'ny seza tokana ary namaky ny sanganasan'i Wuerffel, nisotro ny kafe Geisha novokarin'ny tanana, dia madio sy tsotra, fa io no sehatra mahafinaritra sy mangina indrindra tiako.
Ny tsipika mavitrika misokatra sy mangarahara amin'ny faritra ho an'ny besinimaro dia mipaka hatrany amin'ny lavarangana, manitatra ny habaka iaraha-miaina eo an-trano sy any ivelany, mamela ny maripanan'ny tara-masoandro hilatsaka ao amin'ny faritry ny daholobe iray manontolo, ary ny fihenan'ny hazavana manjary lasa singa manan-danja amin'ny faritra ampahibemaso hametrahana ny feon'ny habaka.
Ny fomba ankapobeny dia fomba famolavolana fanesorana, fa tsy firavaka firy, ary ezahana ho minimalism, mamoaka ny endrika voalohany indrindra amin'ny fitaovana.
Ny feo fotsy ho famolavolana lehibe, manasongadina ny hatsarana voajanahary indrindra amin'ny fitaovana, ary manodidina ny atmosfera madio sy voajanahary amin'ny habakabaka, ankoatry ny karazana firavaka vy mainty nampiana ny habaka, mampitombo ny haavon'ny habe telo-habe.
Ny faritra misokatra ho an'ny daholobe dia manome tsipika mavitrika malefaka. Ny famolavolana ny faritra ho an'ny besinimaro miaraka amin'ny axis iray dia tsy vitan'ny hoe manitatra ny fahitana fa koa mamorona tontolo kely hahafahan'ny tompony mamaky sy manasitrana ny vatana sy ny saina.
Ny tsipika madio amin'ny kabine fotsy any an-damosina dia mampisy rivo-piainana vaovao sy marefo amin'ny faritra vakiany, ary ny feo fotsy ao amin'ny habaka tsy voafetra dia manandratra ny habe sy ny famirapiratan'ilay toerana.
Ny tetikasa dia manana tombony amin'ny jiro tsara, ny jiro voajanahary ary ny jiro anatiny dia manana ny hatsarana mampifanaraka ny fahatsapana hazavana eny amin'ny habakabaka, ny fandaminana maivana ataon'ny mpamolavola azy dia milatsaka amin'ny zorony anatiny rehetra.
Ny lokon'ilay habaka dia fotsy, miaraka amin'ny volavolan-kazo maivana sy ny firakofana anaty rano milamina mifampitohy eo amin'ny habakabaka, maivana ny varimbazaha ary mamoaka ny endrika voajanahary, manampy fahatsapana malefaka amin'ny toerana fotsy.
Ny feo tsy miandany voajanahary dia mahatonga ny toerana ho toa mangina indrindra, ary ny zavatra fanaka dia mainty, fotsy ary volondavenona hifanaraka amin'ny toerana madio sy tsotra, mandika ny feo voajanahary sy minimalista ao amin'ny habaka.
Previous :: Fahatsorana an-tanàn-dehibe, ny hatsaran-tarehy ny loko mainty, fotsy ary ny lokon'ny volondavenona - DAS Design Next: 2020 Famolavolana efitrano fandraisam-bahiny vaovao | Fomba 80
2020 / 12 / 12 6082
2020 / 12 / 05 6437
2020 / 11 / 29 7563
2020 / 11 / 29 6523
2020 / 11 / 29 6750
2020 / 11 / 17 6477